KUGADZIRISWA: WINDOWS 10 GADZIRISO KANGANISO 0X80070002 UYE 0X80070003 (YAKAGADZIRIDZWA 2020) - WINDOWS 10
Kugadziriswa: Windows 10 Gadziriso Kanganiso 0x80070002 uye 0x80070003 (Yakagadziridzwa 2020)
Kuwana Windows 10 Gadziriso Kanganiso 0x80070002 paunenge uchitarisa kana kuisa zvigadziriso zvazvino Windows 10 Mbudzi 2019 Kwidziridzo? Kana iwe unogona kucherechedza dzimwe nguva windows inonamira pakutsvaga zvekuvandudzwa pane imwe nongedzo uye wotadza kuisa neakasiyana makodhi emakodhi senge 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020. Pane zvikonzero zvechokwadi zvinogona kukonzera windows kugadzirisa kutadza kuisa asi chinonyanya kukanganisika Yakagadziriswa dhatabhesi.
Zviri Mukati ratidza 1 Windows Dzokorora Kanganiso 0x80070002 1.1 Mhanya Windows Gadziridza Troubleshooter 1.2 Dzorerazve Windows Dzokorora Zvikamu 1.3 Isa Windows Dzokorora nemaoko
Uye iyo Yakanakisa inoshanda mhinduro (pachezvangu ini yandakawana) kugadzirisa akawanda windows kugadzirisa zvine chekuita matambudziko kudzima iyo yakadzoserwa yekudzokorora, kurodha pasi rese zvakare, uyezve kuyedza kuiisa.
Pane nzira mbiri dzekuita izvi:
Nemaoko paunodzima mafaera ekuvandudza, uye otomatiki kuburikidza ne Windows Dzokorora Troubleshooter app kubva kuMicrosoft. Ngatione maitiro ekuita aya maAction.
Windows Dzokorora Kanganiso 0x80070002
Usati waseta patsva Windows yekuvandudza dhatabhesi (Delete iyo yakadzokororwa yekudzoreredza uye woidzosera) Pano mamwe mhinduro dzekutanga dzaunofanirwa kuisa uye woongorora kuti dzinogona kubatsira.
Chekutanga cheki tarisa, iwe une yakanaka uye yakagadzikana internet kubatana kurodha windows windows kubva kuMicrosoft Server. Uye uve nezvakakwana Mahara nzvimbo pane yako system yakaiswa dhiraivha (C: Dhiraivha) kuchengeta uye kuisa windows windows.
Tarisa uye gadzirisa yako Zuva reSystem & Nguva, Dunhu kubva kuZvirongwa -> Nguva & Mutauro -> Pano gadzirisa yako Zuva & Nguva marongero uye enda kuDunhu & mutauro pano tarisa yakatarwa kuUnited States uye mutauro wakaiswa Chirungu (nyika dzakabatana) Sezvo default.
Dzima Chero Chengetedzo Software ( Antivirus ) uye bvisa VPN kana yakagadzirirwa.
Bhutsu windows mu bhutsu yakachena state, Uye tarisa kuvandudzwa kwazvino kubva kuZvirongwa -> kugadzirisa & chengetedzo -> windows kugadzirisa -> tarisa kuvandudzwa. Izvi zvinogadzirisa nyaya kana paine wechitatu anodzivirira windows inogadziridza kurodha pasi nekuisa.
Zvakare, vhura Command Prompt Semubati uye Run Dzinga Raira ' DISM.exe / Online / Kuchenesa-mufananidzo / Kudzorera hutano ”Zvinogona kutora maminetsi akati kuti oparesheni yekuraira ipedziswe.
Mushure mekupedzisa zana% yekuyera maitiro mhando kuraira, sfc / scannow ndokurova kiyi yekupinda ku tarisa uye dzosera yakaora system mafaira . Mira kusvikira 100% kuti upedze maitiro mushure mekutanga windows uye tarisa kuti uwane zvitsva patsva rinotevera.
Mhanya Windows Gadziridza Troubleshooter
Kana kuisa mhinduro dziri pamusoro dzisina kugadzirisa dambudziko uye windows ichiri kutadza kuisa izvo zvazvino nyowani neKanganiso 0x80070002 kana 0x80070003. Ngatisvikei kune Yepamberi yekugadzirisa chikamu. Microsoft ine Windows yekugadzirisa chinetso, Kumhanya ichi chishandiso cheki Uye gadzirisa angangoita ese hwindo rekugadzirisa zvine chekuita nematambudziko.
Unogona Kumhanya Iyo Windows yekugadzirisa chinetso kubva kuZvirongwa (Windows + I), Gadziriso & Chengetedzo. Dzvanya paTroubleshoot, Sarudza Windows kugadzirisa Uye Mhanya iyo troubleshooter Sechifananidzo chinoratidzwa pazasi.
Iyo yekunetsa inomhanya uye kuyedza kuona kana paine matambudziko aripo anodzivirira komputa yako kubva kurodha pasi nekuisa Windows Dzidzo. Mirira kusvikira wapedza iyo Troubleshooting maitiro Mushure meizvozvo restart windows uye tarisa kuti zvive zvitsva.
Dzorerazve Windows Dzokorora Zvikamu
Kazhinji yenguva inomhanya Windows yekugadzirisa chinetso kugadzirisa uye kugadzirisa matambudziko ane hukama. Asi kwauri, kana ichiri kukonzera kukanganisa uchitarisa nekuisa windows kugadzirisa wobva waedza kuseta windows kugadzirisa zvinhu uye nemaoko bvisa ngoro yakaora windows yekuvandudza mafaira. Iko windows kurodha pasi uye nekuisa matsva ekuvandudza mafaira kubva kuMicrosoft server.
Chekutanga pane zvese Press Windows + R, mhando services.msc uye tinya ok kuvhura windows masevhisi.
tsvaga sevhisi inonzi windows kugadzirisa, Kurudyi tinya pairi uye sarudza Mira.
Ita maitiro akafanana eSevhisi inonzi Background Intelligent Transfer Service (BITS) uye Superfetch.
Mushure mekumisa aya masevhisi kudzikisira iyo yazvino hwindo.
Zvino vhura C: WINDOWS SoftwareDistribution Download .
Pano bvisa zvese zviri muDownload faira.
(Usatombo kunetsekana nezve aya mafaera, aya windows windows kugadzirisa mafaera, Uye nguva inotevera kana iwe uchitsvaga kuti uwane windows windows tora mafaira aya).
Tevere, dzokera paSevhisi hwindo, uye tanga iyo Windows Gadziridza sevhisi uye ayo anoenderana masevhisi awakambomira kare. Ndo zvese zvawakabudirira kuseta windows kugadzirisa zvinhu. Zvino vhura iyo Zvirongwa app, sarudza iyo Dudziro & Chengetedzo tinya paWindows Dzokorora tebhu uye tarisa kuvandudza nyowani. Dhawunirodha uye gadza chero zvitsva zvitsva zvinowanikwa.
Isa Windows Dzokorora nemaoko
Kana mhinduro dzese dziri pamusoro dzikatadza kugadzirisa dambudziko racho, zvakadaro windows inogadziridza yakanamatira kurodha pasi kana kutadza kuisa saka ngatiise mawindow emawoko nemaoko. Shanyira iyo Windows 10 gadziridza nhoroondo rewebhu peji kwaunogona kucherechedza matanda eese apfuura maWindows windows ayo aburitswa.
Nezve ichangobva kuburitswa gadziriso, nyora pasi iyo KB nhamba.
Zvino shandisa Windows Dzokorora Catalog Website kutsvaga iyo yekutsanangudza inotsanangurwa nenhamba yeKB yawakanyora pasi. Dhawunirodha iwo marongero anoenderana kana muchina wako uri 32-bit = x86 kana 64-bit = x64.
Kubva 30 Ndira 2020 -
windows kugadzirisa (0x80070422)
KB4532695 (OS Inovaka 18363.628) ndiyo yazvino gadziriso ye Windows 10 vhezheni 1909
KB4532695 (OS Inovaka 18362.628) ndiyo yazvino kugadzirisa ye Windows 10 vhezheni 1903
KB4534321 (OS Vaka 17763.1012) ndiyo yazvino gadziriso ye Windows 10 vhezheni 1809
KB4534308 (OS Vaka 17134.1276) ndicho chazvino chigamba che Windows 10 vhezheni 1803
Iwe Unogona kuwana iyo yekudhanilodha yekudhawunirodha chinongedzo cheichi chigadziriso kubva pano.
Ndizvozvo zvese mushure mekuisa zvidzoreso zvinongotangidza komputa kuti ishandise shanduko. Zvakare Kana iwe uri kuwana Windows Gadziriso yakanamatira nepo kusimudzira maitiro ingoshandisa zviri pamutemo mhizha yekugadzira mhizha kusimudzira windows 10 vhezheni 1903 pasina kukanganisa kana dambudziko.
Wakaisa mhinduro idzi kugadzirisa windows kugadzirisa matambudziko? tizivise kuti ndeipi sarudzo yakashanda iwe. Zvakare, Verenga
Yakagadziriswa: Windows 10 Zvirongwa kwete Kuvhura Kushanda
Yakagadziriswa: Windows 10 Taskbar isiri kushanda mushure meMay 2019 kugadzirisa
Maitiro ekugadzirisa laptop Touchpad isiri kushanda nemazvo windows 10
5 mhinduro dzekugadzirisa iyo Netflix app isiri kushanda pamawindows 10
nei pc yangu ichitangazve zvisina kujairika
shandisa hard drive segondohwe windows 10
chromecast isiri kushanda windows 10
sei uninstall windows 10 inogadziridza kubva kuraira Prompt
youtube kana kutamba kusingatange munguva pfupi chrome
win10 start bhatani isiri kushanda